कस्ता ब्यक्तिले गर्न सक्छन बलात्कार ? बलात्कारका घटना हुनुको यस्ता छन मनोबैज्ञानिक कारणहरु ! - Nepal's No.1 News portal
गोपाल ढकाल । पछिल्लो समय हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता अघन्य अपराधका घटनाहरु दिनानुदिन बढदै गइरहेका छन। बलात्कारमा शिशुदेखि ९२ वर्षकी वृद्धासमेत परेका छन् । अझ परिवारभित्रैबाट हिंसा र बलात्कृत भएका छन् । सामूहिक बलात्कार भएका छन् । बलात्कार र बलात्कारपछि हत्या भएका छन् ।
कोरोनाको कहर र लकडाउनको बिचमा पनि यौन हिंसा, बलत्कारका घटनाहरु बढेर गएको देखिन्छ। भखरै मात्र बझाङको मष्टा गाउँपालिका २ की १२ वर्षीय बालिका सम्झना कामीको बलत्कार पछि हत्या भयो । बलात्कार सामाजिक समस्या हो । एउटा गम्भीर तथा जघन्य अपराध हो । राजनीतिक मुद्दाको बिषय होइन । अपराधीलाई सजायको ब्यबस्था कानुनले स्पष्टसँग गरेको छ । मुत्यु दण्ड बा कडा कानुनले मात्र यस्तो अपराध कम हुन्छ भन्न सकिँदैन । नेपालको संविधान र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालले गरेका संधि सम्झौताका आधारमा पनि मुत्यु दण्डको कानुन बनाउन सकिदैन । यसको लागि शिक्षा , चेतनाको बिकास नै उतम उपाय हो ।
नैतिक पतन : नैतिक रुपमा पतन भएका ब्यक्तिले पशु भन्दा तल्लो स्तरको ब्यबहार गर्न सक्छन । यस्ता नैतिक रुपमा पतन भएका ब्यक्तिहरुबाट आफन्त पनि बलात्कारको सिकार हुन सक्छन ।
बदलाको भवना र प्रतिशोध : कतिपय अबस्थामा जानिजानी तथा रिस र उत्तेजनामा बदलाको भावना लिएर प्रतिसोध साध्ने उदेश्यले पनि यस्ता घटना भईरहेका हुन्छन ।
(लेखकः , मनोबिद् ढकाल मार्क नेपाल मनोसेवा केन्द्रमा आबद्ध छन् )